Jawaabtii: C/Waaxid oo Dafiray Beel Degta Puntland Sidii isaga Qabiilkiisa Loo Dafiray
Akhristayaal sida aan la soconno markii wiilashii ilmo Yacquub ahaa aabbahood ka dalbeen inuu Nabi Yuusuf oo yar ku daro si ay Yuusuf iyo Yacquub (Calayhimaa Salaam) ukala fogeeyaan. Markay dhagartii sameeyeen waxay lasoo shirtageen kalmad ay ka maqleen afka Nabi Yacquub (CS) oo ahayd: haddaan Yuusuf idin ku daro waxaan ka baqayaa iney yeey/uubato cunto, iyaguna waxay dhaheen yeey/uubato baa cuntay. Miyeydaan arag qab-qablayaal Soomaaliyeed oo qaraxyadii Newyork iyo Washington ka dib, qofkii ka horyimaadaba dhaha waa Al-Qaacida? Waxay ka maqleen Bush.
Walaal sheegtay Saciid Xasan Dhego-cadde oo la mooddo inuu Boosaaso joogo ayaa yiri sidii C/Waaxid qabiilkiisa loo dafiray ayuu u dafiray qabiil Puntland dega isagoo Dir ka wada. Horta wuxuu ku dagmay maqaalkii aan ka qoray Mudugonline oo aan lahaa qabiilkaygii bay shakki gasheen. Maqaalka waxaan uga danlahaa inaan dadka tuso siday wax u qoreen dad sheegtay inay yihiin bahda Mudugonline. Iyagu waxay wax ku qoreen bogga Mudugonline laakiin aniguu ahaa qofkii ku faafiyey qaar ka mid ah boggagga ugu caansan kuwa Soomaaliyeed. Ma la tahay Saciid in qofi faafiyo wax isaga wax u dhimaya? Marka nimanka maamula magacyadooda iyo jufooyinkoodaba waan aqaan iyaguna waa yaqaanaan, marka haddii iyagu laftoodu ra’yi ahaan u qori lahaayeen, oo qofkii ra’yiga lahaa magaciisa ku saxiixo muhiim iima ahaateen xittaa inaan u jawaabo ee waxaan dabo joogay qaabkay wax u qoreen. Marka haddii cidi dhaleeco ka soo gaartay waa iyaga cidda ku ceeboowday. Mudugonline iyo taageerayaasha C/hi oo dhan midkoodna ma dafirikaro qabiilkeyga. Marka anoo ka bilaabaya cinwaankaaga oo sidii ilmo Yacquub aad ku dagantay, been-abuurna ku biloowday waxaan ka leeyahay:
1. Haddaan dhihi lahaa Dirtu ma degto Punltand, magaca maqaalkaagu micnuu samayn lahaa. Waxay ahayd inaadad ugu badnaan tiraahdid C/Waaxid oo qabiilkii Dirta aan xussin markaasna waxaad rabtid falkisid. Marna erayga dafiraad meesha ma soo gali karo. Makala saari kartaa tuhun iyo dafiraad? Anigu Mudugonline waan ku eedeeyey dafiraad maxaa yeelay magacaygii iyo qabiilkaygii bay isu diideen laakiin anigu ma qabiilka Dir baan soo hadal qaaday? Marka horta cinwaankaagu “waa mar loo noqay”.
2. Teeda kale anoo samaynaya tirokoob ama cilmi baaris ku saabsan qabiilooyinka Puntland dega haddaan Dirta ka tagi lahaa waxaa suurtogal ahayd inaad tiraahdid muxuu uga tagay, tuhunkaaguna meeshuu rabo buu kula gali karay.
3. Hadda lafteeda maad caddayn inaad qabiilkaas tahay iyo in kale ilayn anigu e-mail iyo magac jawaab iskagama qori karo. Dir ahaan kuulama kaftami karo oo waxaa dhici karta inaadan qabiilkaasba ahayn.
4. Maqaalka waxaan ku xussay inay jiraan qabiilooyin aan Daarood ahayn oo aan qaar magacaabay waxaanan soo qoray (iyo qabiilooyin kale oo ay dhici karto inaysan Daarood ahayn). Runtii markaan maqaalka qorayey waxaan is iri waxaa dhici karta qabiilooyin kale oo aan aqoon inay halkaas degaan marka si aan cududaar u helo ayaan sidaas yeelay laakiin markaas Dir maskaxdayda waa ka maqnayd.
5. Walaalkeen wuxuu yiri Dirtu waxay degtaa gobollada Puntland oo dhan min Sanaag Bari ilaa Waqooyiga Mudug. Runtii kuma xeel dheeri sida loo kala degenyahay Puntland laakiin walaalkeen isagaa macluumaadkaas na siiyey. Haddii Dirtu gobollada Puntland degto, Cabdullaahina ku sheegtay inay reer abti u yihiin muxuu C/hi Dir u qabtay? Wasiirada iyo Wasiir ku-xigeenada ma ku jiraan? Golaha baarlamaanka yeey ku leeyihiin? Guddoomiyayaasha gobollada iyo degmooyinka wax maka heleen? Madaxda ciidamada wax maku leeyihiin?
6. Qabiilooyinka aan soo taxay uma soo tixin ammaan, qof kasta oo maqaalkaas akhriyey wuu garanayaa in magaalku ku socdo booqashadii C/hi ee Thailand, anoo caddeynaya in sidii Muuse Suudi u xushay waftigiisa ka macquulsanayd sida kornaylku yeelay. Sheekadu waxay u dhacaysay idinkoo intaas oo qabiil ah oo soo taagan baa C/hi sidaas yeelay marka ma waxaad rabtay inaan canaanta ku daro Dir ilayn meesha baarlamaan iyo ergo kuma qaybinayne?
7. Maaddaama reer adeerkay ku hungoobeen ka hadalka qolodayda, adiguna waxaad xustay cidda C/hi iyo ani reer abtiga noo ah. Awal baan sheegay reer Mudugii inay bilaabeen sheeko aan looga horrayn marka adoo sheegtay inaad Boosaaso joogto, ma waxaad furaysaa furin ku cusub kaftanka Soomaalida sida inaad tiraahdid reer abti baa la taageray iyo saas?
8. Dagaalkaad xustay ee dhexmaraya Dir iyo Marreexaan waa dagaal sokeeye. Ilaah baa laga magangalaa fidnada noocaas ah. Marka iyadoo Ramadaan lagu jiro in sheeko noocaas ah maskaxdaada ku soo dhacdo waa arrin yaab leh. Anigu waxaan leeyahay Ilaahoow dagaalkaas qabooji oo dadkaas ehelka ah, dariskana ah nabad waarta dhexmari. Miyaadan ogayn in Diri Daarood reer abti u tahay waa adiga C/hi inay reer abti u yihiin xussee? Waxaan shakki ku jirin in qofina uusan jeclaadeen inuu qab-qable abti ama qaraabo la noqdo hadduu awoodo marka magaran waxaad Dir iyo C/hi iskula doonanaysid?
9. Haddii xuska Dir aan uga tagay dagaalka ay reer abtigay kula jiraan dartiis, Daaroodka aan soo xussay intooda badan waan ka tagi lahaa kadib markii iyaga iyo reer adeerkay dagaal dhexmaray, mana heleen cid dambe oo aan wax ka qoro ilayn qabiilooyinka Soomaaliyeed intooda badan waan is dagaalnee. Waraaqahaan C/hi ka qoray way badanyihiin waligayna reer abtigiis wax kama sheegin marka maxaa maanta igu khasbay inaan reer abtigiis usoo dhigto?
Waxaan kusoo gabagabaynayaa in Caa’isho (RC) markay Nabiga u xanaaqsantahay ay ku dhaaran jirtay Ilaahii Nabi Ibraahim (CS). Nabigu (SCW) wuxuu Caa’isha (RC) ku yiri waan kala aqaan markaad ii xanaaqsantahay iyo markaad caadi tahay. Markaad caadi tahay waxaad ku dhaarataa Ilaaha Nabi Muxamed (SCW) laakiin markaad xanaaqsantahay waxaad ku dhaarataa Ilaaha Nabi Ibraahim (CS). Labo Ilaah baa jirta kama wado ee labada Nabi (CS) bay ku kala halqabsan jirtay. Caa’isha (RC) waxay tiri Nabi Alloow magacaaga kaliya ayaan ka hijroodaa. Marka haddaad tiri Dir oo C/hi u ah reer abti oo degta gobollada Puntland oo dhan min Sanaag Bari ilaa Waqooyiga Mudug sidaad xustay, waxay xaq u lahaayeen inay madaxda Puntland sida golaha xukuumadda iyo baarlamaanka ama qaybaha kale sida taliyayaasha ciidamada, guddoomiyaasha gobollada iyo maareeyayaasha wax kulahaadaan. Sida cadna wax Dir ah kama dhexmuuqdaan. Marka ninkii abtiga loo ahaa hadduu dadkaas xaqoodii duudsiyey oo uusan madaxda Puntland ku xusin, maxaad iga rabtaa aniga oo magacooda kaliya ka tegay, xittaa kaba dhig inaan tuhunkaas uga tagay?